बरभञ्ज्याङमा भएको आगलागी मध्यरात नियन्त्रणमा, एक करोड ९० लाख बराबरको क्षति « Mechipost.com
बरभञ्ज्याङमा भएको आगलागी मध्यरात नियन्त्रणमा, एक करोड ९० लाख बराबरको क्षति
प्रकाशित मिति: २२ पुष २०७८, बिहीबार १०:०६
पाँचथर, २२ पुस
पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ बरभञ्ज्याङमा हिँजो बेलुकीबाट सुरु भएको आगलागी गएको मध्यरात नियन्त्रणमा आएको छ । उक्त आगलागीमा तीन वटा घर र छ वटा पसलहरु जलेर नष्ट हुँदा रु. एक करोड ९० लाख बराबरको क्षति भएको छ ।
गएराती १०ः४० बजे बरभञ्ज्याङका जीतबहादुर मेयोङ्बा लिम्बूको घरमा विद्युत सर्ट भई घरबाट आगलागी सुरु भएको थियो । आगलागीमा मेयोङ्बाको दुई तले घर, दूग्ध डेरी, किराना पसल र नगद रु. सात लाख तथा सोही घरमा रहेको नेपाली काँग्रेस फालेलुङ–६ को वडा कार्यालय जल्दा रु. ५७ लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।
यस्तै उक्त आगलागी छिमेकी रामजीत राई र मनबहादुर राईको घरमा समेत सल्केको थियो । आगलागीमा रामजीत राईको दुई तले घर र घरमा रहेका करीब रु. ३५ लाख मूल्यका सम्पूर्ण सामग्रीहरु तथा उक्त घरमा डेरा गरी पसल गर्ने धर्म केरुङको किराना पसल र टेलर्स आगलागीमा जल्दा करीब रु. पाँच लाख मूल्यको क्षति भएको छ ।
यस्तै मनबहादुर राईको दुई तले घर, उक्त घरमा स्थानीयवासी मेहेन्द्र राईले सञ्चालन गर्दै आएको आइएमइई मनि ट्रान्सफर शाखा कार्यालय, मेहेन्द्रकै जुत्ता पसल तथा नगद र गरगहना जलेका छन् । सोही घरमा स्थानीयवासी धनप्रसाद राईले सञ्चालन गरेको किराना पसल र कम्प्युटर सेन्टर, सुरेन्द्र राईले सञ्चालन गरेको फेन्सी पसल र अलैंची गोदाम तथा रञ्जना राईको टेलर्समा आगलागी हुँदा रु. ९३ लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।
आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रहरीको सिदिन, प्राङबुङ र नांगीन प्रहरी चौकीबाट सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्माको कमाण्डमा २५ जना तथा सशस्त्र प्रहरी बल २ नं. हेडक्वाटर हिमशिगर गुल्म फिदिमबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र साउदको कमाण्डमा १४ जनाको टोली आगलागी नियन्त्रणका लागि घटनास्थल पुगेको थियो ।
फिदिमबाट गएका दुई वटा दमकलको सहायताले स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीले मध्यरात १ बजे आगलागी नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायव उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो । आगलागीमा घरबार गुमाएकाहरु छिमेकीको शरणमा बसेका छन् ।